हङकङका डन र ब्यवसायीहरु – निरज राई | WWW.HATTERI.COM
← हङकङको समुन्द्रमा ४ दिन देखि तेल प्रदुषण ..!
सा तिन मा बस दुर्घटना हुँदा १ को मृत्यू १७ घाईते ! →
हङकङका डन र ब्यवसायीहरु – निरज राई
एउटा सत्य कथा भन्छु,
एक बिदाको दिन दिउँसो एक जना परिचित दाइले फोन गरेर छेवैको म्याक्डोनाल्डमा बोलायो। उनले मलाई गुन्डा लाएर धम्काउँदैछ भने पछि म पनि तुरुन्तै म्याक्डोनाल्ड पुगेँ। त्यहाँ जस्तै अर्को धराने साथीलाई पनि उक्त परिचितले बोलाएको रछ। त्यहाँ पुग्दा परिचित दाइ,, एउटा तथाकथित नेपाली डन, एकजना नेपाली कानूनी परामर्शदाता बिच बिबाद भैरहेको थियो।
मैले त्यो परिचित दाइलाई के भयो? भनी सोधे पछि उसले बेलिबिस्तार लगाउन शुरु गर्यो,
ती परिचित दाई कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्दा घाईते भएछ । र त्यसको क्षतिपूर्तिको लागि उसले कानुनी उपचार खोज्ने क्रममा ती कानूनी परामर्शदाताको सहयोग लिएछ, मुद्दा किनारा लागे पछि पाएको क्षतिपूर्तीबाट 5000$ शुल्क दिने शर्तमा। तर क्षतिपूर्ती छ अंकको डलरमा पाएपछि परामर्शदाता ले शुल्क बापत 5000 माग्दा उसले 1500 $मात्रै दिन्छु भनेछ।
त्यसो भए पछि आफै पनि कमजोर शारीरिक अवस्थाका ती परामर्शदाताले नेपाली डनलाई बोलाएर कबोलेको पूरा पैसा दिन धम्काएको रहेछ। सबैजना चिनेजानेकै नेपालीहरू भएकोले मैले “त्यत्रो छ अंकको क्षतिपूर्ती दिलाईदिएको रैछ कबोलेको 5000 डलर दिनु “भने पछि ती परिचित दाइले कबोलेको पैसा परामर्शदातालाई बुझायो र झगडा साम्य भएको थियो।
मलाई लाग्छ यो घटना बर्तमान अवस्थामा चलिरहेको डन ,समाजसेवी पत्रकार बीचको द्वन्द निर्माण गर्ने एउटा मूल कडी हो। कारण अहिले तिनै डन र परामर्शदाता( जो अहिले निर्माण ब्यवसायी भएका छन) बीचको रडाको ले चरम रूप धारण गरेर नेपाली समाज द्वन्दको स्थितिमा पुगेको छ। अर्थात आफ्नो ब्यवसायिक स्वार्थको लागि प्रयोग गरे पछिको लेनदेनको कुरामा उब्जिएको मतभिन्नताको कारण मच्चिएको रडाकोले अहिले होङ्गकोङ्गेली नेपाली समुदायनै मुछिएको अवस्था छ।
यहाँ मुख्य प्रश्न के हो भने तथाकथित डनलाई तह लाउदा भोलि तिनै ब्यवसायीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि अर्को डन जन्माउने निश्चित छ। कारण कानुनी सुरक्षाको लागि चाहिने सबूत जुटाउदा आफै समस्यामा पर्ने डरले उनिहरू डनको प्रयोग गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ। के हामीले चाहेको यहि हो? हामी गुन्डागर्दी रहित समाज चाहन्छौ भने डनलाई मात्रै लक्षित गरेर प्रहार गर्नुको अर्थ हातलाग्यो शून्य बाहेक अर्थोक हुन्न। बरू संगसंगै डन जन्मिनुका कारण माथी फोकस गरेर त्यै अनुरूपको प्रयास थाल्नु चै बुद्दिमानी हुन्छ कि?
One Response to हङकङका डन र ब्यवसायीहरु – निरज राई
नरेन्द्र गुरुङ says:
यहि कुरा मैले उठाएको थिए दुई जनाको लेनदेन मामलामा हामी नपरौ न लेखौ भन्दा त उफ्रि उफ्रि लेख्यौ अनि धम्की दियो हेरे लेख्ने ले धम्की न पाएर कस्ले पाउछ त म समेत फेसबुकमा बेला बेला लेकि टोबलेको धम्की त कति कति र फेक आइडी बाट बारम्बार प्रहार सहनु पर्यो सबै नेपाली हौ जुन सुकैले जे गरोस् बेइज्जत त हामी नेपालीको हुने हो सबै जान्ने भएर अर्काको लेनदेनमा हात नहालौ भनेको त पत्रकार र केही साथिहरु बोलचाल नै बन्द गरे कति निच सोच रहेछ ।